အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မရပ်မနားကြိုးစားကြမယ် … – Trend.com.mm
လူတိုင်းမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်လျှောက်ရင်း လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြတယ်။ အနှောင့်ယှက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။ တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ ဝေဝါးသွားအောင် လမ်းတစ်ဝက်မှာတင် ချွတ်ချော်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကို လူတိုင်းလိုလိုမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးမလဲ ? ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အားအင်တွေကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ ?
ကိုယ် ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ သေချာသိအောင်လုပ်ပါ
လူတွေဟာ ဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေချင်ကြတာပါပဲ။ လိုချင်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီဆို အဲ့ဒီိနေရာမှာပဲ ရပ်တန့်သွားကြတာများတယ်။ သင်သိထားရမှာက
ဒီမှာ လမ်းမဆုံးသေးဘူး။ အဆက်မပြတ် ကြိုးစားနေမှဖြစ်မယ် ၊ တစ်ချိန်လုံး ဒီအရာက
မြဲမနေဘူးဆိုတာ မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးကို တက်သွားတဲ့အခါ ပြန်ပြုတ်မကျ
အောင် သေချာကုတ်ထားသင့်သလို ဒီထက်အမြင့်ဆုံးကိုလည်း ထပ်ပြီး တက်လှမ်းနိုင်
အပေါ်ဆုံးရောက်တာနဲ့ သင်ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ တွေးနေပြီဆိုရင် သင့်အနောက်မှာ
အမှီလိုက်နေတဲ့ လူရှိသေးတယ်ဆိုတာကို သတိရလိုက်ပါ။ ဘဝမှာ လူသုံးမျိုးရှိသတဲ့။ လူအေး ၊ လူရင်း နဲ့ လူရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူအေး – ဂရုစိုက်တယ် ။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကြည့်ပြီးမှ စကားပြောတယ်။ သူများတွေ ဘာလုပ်နေလဲ သူကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူများခေါင်းဆောင်မှုအနောက်မှာပဲ နေနေတတ်တယ်။
လူရင်း – သူက ဖိအားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်တယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို ကောင်းကောင်းပြီးအောင် အဆုံးသတ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ ချီးမွမ်းခံချင်တယ်။ လေးစားဂုဏ်ပြုခံချင်တယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီး အာရုံစိုက်မှုလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်။
လူရှင်း – ဒီလိုလူမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်။ ကြောက်လန့်တာမျိုး မရှိ ။ ဖိအားတွေများလာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖြေရှင်းပြီး အောင်မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ရလဒ်တွေထက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပိုချစ်တယ်။ သင်ကရော ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲ ?
အရည်ချင်းတွေဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဘယ်တော့မှမတူညီဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရမယ်
” အောင်မြင်မှုဆိုတာ အရည်ချင်းနဲ့မတူညီဘူး ” လို့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာကြီး Tim Grover က ဆိုပါတယ်။ သင်က အထက်ကပြောသွားတဲ့ လူရှင်းလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကို ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ကိုက်ညီအောင် အလုပ်လုပ်မှဖြစ်ပါမယ်။ အရည်ချင်းဆိုတာ တစ်စုံတစ်ခုကို သင်စတင်ဖို့အတွက် အကူညီပေးတဲ့အရာပါ။စီးပွားရေးလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့အရည်ချင်းတွေဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံတယ်လို့မထင်ကြပါဘူး။
ကိုယ့်အရည်ချင်း ကိုယ်သိအောင်လုပ်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်လှမ်းနိုင်အောင် သူတို့က ဓားသွေးသလို အရည်ချင်းတွေကိုလည်း ထက်နေအောင်ကြိုးစားနေသူတွေပါ။
အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်း ကျရှုံးဖူးကြပါတယ်။ အဆက်မပြတ် ကြိုးစားနေမှသာ သင့်အတွက်အထိပ်ထွဋ်ဆိုတာလည်း ရှိလာမယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုအားပေးရမလဲလို့ သင်ယူချင်ရင် အောင်မြင်သူများရဲ့နည်းနာ လမ်းစဉ်တွေကို လေ့လာပါ။ သူတို့ဟာ ကျဆုံးရမှာမကြောက်ဘူး။ ကျဆုံးမှုတွေကနေ အတွေ့အကြုံများစွာကို သူတို့ရရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲ သူတို့ကို ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုငျးမှာ ဖွဈခငျြတဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတှေ ကိုယျစီရှိကွပါတယျ။ တဈခါတဈလေ ပနျးတိုငျကို ရောကျအောငျလြှောကျရငျး လမျးပြောကျသှားတတျကွတယျ။ အနှောငျ့ယှကျတှဝေငျလာတတျတယျ။ တကယျဖွဈခငျြတဲ့ စိတျဆန်ဒတှေ ဝဝေါးသှားအောငျ လမျးတဈဝကျမှာတငျ ခြှတျခြျောသှားတတျပါတယျ။ ဒါမြိုးကို လူတိုငျးလိုလိုမှာဖွဈတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီအခါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘယျလိုစိတျခှနျအားတှပေေးမလဲ ? ရှဆေ့ကျလြှောကျဖို့အားအငျတှကေို ဘယျလိုပွနျယူမလဲ ?
ကိုယျ ဘာဖွဈခငျြတာလဲ သခြောသိအောငျလုပျပါ
လူတှဟော ဘဝမှာကောငျးကောငျးမှနျမှနျနခေငျြကွတာပါပဲ။ လိုခငျြတဲ့ ရလဒျတဈခုကို
ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရပွီဆို အဲ့ဒီိနရောမှာပဲ ရပျတနျ့သှားကွတာမြားတယျ။ သငျသိထားရမှာက
ဒီမှာ လမျးမဆုံးသေးဘူး။ အဆကျမပွတျ ကွိုးစားနမှေဖွဈမယျ ၊ တဈခြိနျလုံး ဒီအရာက
မွဲမနဘေူးဆိုတာ မှတျထားဖို့လိုပါတယျ။ အပျေါဆုံးကို တကျသှားတဲ့အခါ ပွနျပွုတျမကြ
အောငျ သခြောကုတျထားသငျ့သလို ဒီထကျအမွငျ့ဆုံးကိုလညျး ထပျပွီး တကျလှမျးနိုငျ
အပျေါဆုံးရောကျတာနဲ့ သငျရပျပဈလိုကျဖို့ တှေးနပွေီဆိုရငျ သငျ့အနောကျမှာ
အမှီလိုကျနတေဲ့ လူရှိသေးတယျဆိုတာကို သတိရလိုကျပါ။ ဘဝမှာ လူသုံးမြိုးရှိသတဲ့။ လူအေး ၊ လူရငျး နဲ့ လူရှငျး ဖွဈပါတယျ။
လူအေး – ဂရုစိုကျတယျ ။ အခွအေနနေဲ့ အခြိနျအခါကွညျ့ပွီးမှ စကားပွောတယျ။ သူမြားတှေ ဘာလုပျနလေဲ သူကွညျ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမြားခေါငျးဆောငျမှုအနောကျမှာပဲ နနေတေတျတယျ။
လူရငျး – သူက ဖိအားတှကေို ကိုငျတှယျနိုငျတယျ။ အလုပျတဈခုကို ကောငျးကောငျးပွီးအောငျ အဆုံးသတျနိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ ခြီးမှမျးခံခငျြတယျ။ လေးစားဂုဏျပွုခံခငျြတယျ။ ကောငျးတာတဈခုခုကိုလုပျပွီး အာရုံစိုကျမှုလိုခငျြနတောဖွဈတယျ။
လူရှငျး – ဒီလိုလူမြိုးကတော့ ရှားပါတယျ။ ကွောကျလနျ့တာမြိုး မရှိ ။ ဖိအားတှမြေားလာလညျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဖွရှေငျးပွီး အောငျမွငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားတယျ။ ရလဒျတှထေကျလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပိုခဈြတယျ။ သငျကရော ဘယျလိုလူစားမြိုးလဲ ?
အရညျခငျြးတှဟော အောငျမွငျမှုနဲ့ ဘယျတော့မှမတူညီဘူးဆိုတာ နားလညျထားရမယျ
” အောငျမွငျမှုဆိုတာ အရညျခငျြးနဲ့မတူညီဘူး ” လို့ နာမညျကြျော စာရေးဆရာကွီး Tim Grover က ဆိုပါတယျ။ သငျက အထကျကပွောသှားတဲ့ လူရှငျးလိုဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့အရညျခငျြးတှကေို ကိုယျကငျြ့တရားနဲ့ကိုကျညီအောငျ အလုပျလုပျမှဖွဈျပါမယျ။ အရညျခငျြးဆိုတာ တဈစုံတဈခုကို သငျစတငျဖို့အတှကျ အကူညီပေးတဲ့အရာပါ။စီးပှားရေးလောကမှာပဲဖွဈဖွဈ အောငျမွငျနတေဲ့လူတှဟော သူတို့ရဲ့အရညျခငျြးတှဘေယျတော့မှ ပွညျ့စုံတယျလို့မထငျကွပါဘူး။
ကိုယျ့အရညျခငျြး ကိုယျသိအောငျလုပျပွီး နောကျထပျတဈဆငျ့ထပျလှမျးနိုငျအောငျ သူတို့က ဓားသှေးသလို အရညျခငျြးတှကေိုလညျး ထကျနအေောငျကွိုးစားနသေူတှပေါ။
အောငျမွငျတဲ့လူတိုငျး ကရြှုံးဖူးကွပါတယျ။ အဆကျမပွတျ ကွိုးစားနမှေသာ သငျ့အတှကျအထိပျထှဋျဆိုတာလညျး ရှိလာမယျ။ ဆိုးဝါးတဲ့နရေ့ကျတှမှော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဘယျလိုအားပေးရမလဲလို့ သငျယူခငျြရငျ အောငျမွငျသူမြားရဲ့နညျးနာ လမျးစဉျတှကေို လလေ့ာပါ။ သူတို့ဟာ ကဆြုံးရမှာမကွောကျဘူး။ ကဆြုံးမှုတှကေနေ အတှအေ့ကွုံမြားစှာကို သူတို့ရရှိတယျ။ အဲ့ဒီအတှအေ့ကွုံတှကေပဲ သူတို့ကို ထိပျဆုံးရောကျအောငျ တှနျးပို့ပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။